मृत्यु हुनेबेला दिमागले के सोचिरहेको हुन्छ ? |
मृत्यु हुनेबेला दिमागले के सोचिरहेको हुन्छ ?
09:06:04 | मुख्य समाचार स्वस्थ्य
बीबीसी/ मर्नुभन्दा अघि मानिसको दिमागले के सोचिरहेको हुन्छ होला ? कसैसँग पनि यसको प्रष्ट जानकारी छैन । वैज्ञानिहरुलाई केही जानकारी अवश्य छ तर यो रहस्यको विषय नै रहेको छ ।
तर हालै केही वैज्ञानिकहरुले यसको बारेमा अध्ययन गरेका छन् जसमा यसबारे केही तथ्य पत्ता लागेको बीबीसीले जनाएको छ । बर्लिनको चेरिट विश्वविद्यालय तथा ओहायोको सिनसिनाटी विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले जेन्स द्रेयरको अगुवाईमा यसबारे अध्ययन गरेका हुन् ।
यसको लागि वैज्ञानिकहरुले केही बिरामीको स्नायूप्रणालीको सुष्म अध्ययन गरेका छन् । यसको लागि उनीहरुले बिरामीको आफन्तसँग पूर्वअनुमति लिएका थिए ।
ती व्यक्ति यात भयानक दुर्घटनामा परेर घाइते भएका थिए या त हृदयघातको शिकार भएका थिए । वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए कि पशु तथा मानिस दुवैको दिमाग मृत्युको समयमा एकै तरिकाले काम गर्दछ । साथै एक यस्तो समय पनि आउँछ जब दिमागको कामकाज पुनः बहाली हुनसक्छ ।
यो अध्ययनको प्रमुख उद्देश्य पनि यहि नै थियो कि कुनैपनि व्यक्तिलाई मृत्युको अन्तिम क्षणबाट पनि कसरी बचाउन सकिन्छ । मृत्युको समयमा शरीरमा रगतको प्रवाह रोकिन्छ र त्यसको कारण मस्तिष्कमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन जान्छ । सेरेब्रल इस्किमया नामको यो स्थितिमा जरूरी रासायनिक अवयव कम भएर जान्छ र जसले मस्तिष्कमा ‘इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी’ पुरै सकिन जान्छ ।
मानिसमा गरिएको प्रयोग
तर वैज्ञानिहरुको टिम मानिसको सम्बन्धमा यो प्रक्रियालाई अझै गहराईदेखि बुझ्न चाहन्थे । त्यसैले उनीहरुले केही बिरामीको दिमागको न्यूरोलोजीकल (स्नायु सम्बन्धी) गतिविधिहरुको निगरानी गरे । डाक्टरहरुको तर्फबाट निर्देशन भएको थियो कि ती बिरामीलाई इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स आदिको प्रयोग गरेर बेहोशबाट फिर्ता ल्याउने कोशिस नगरियोस् ।